AmaPolitiki namaZiko eRashiya
Kwiintsuku zaso emva kweSoviet Union, iRashiya iye yabangela ukugxekwa kwinkqubo yezopolitiko elawulwa ngokuqinileyo apho kungekho ndawo encinane kumaqela achasayo. Ukongeza kwimiba emininzi emincinci kunezona eziphambili ezibhalwe apha, ezinye ezininzi zinqatshelwe ukubhaliswa ngokusemthethweni, kubandakanywa nenzame yePublic Freedom Party ngonyaka ka-2011 ngu-deputy-prime minister, uBoris Nemtsov. Izizathu ezingenangqiqo zivame ukunikezelwa ukwenzela ukuphika, ukuphakamisa izikhalazo ezibangelwa yizopolitiko emva kwesigqibo; Isizathu esinikwe ukukhanyela ukubhalisa kwiqela likaNomtsov "kwakungavumelani kumqulu weqela kunye namanye amaxwebhu afakwe kubhaliso olusemthethweni." Nantsi indlela isimo sezopolitiko sibonakala eRashiya:
Iqela likaVladimir Putin kunye noDmitry Medvedev. Leli qela elixhasayo kunye nelobuzwe, elisekwe ngo-2001, likhulu kunawo wonke eRashiya elinamalungu angaphezulu kwezigidi ezi-2. Inobuninzi bezihlalo kwii-Duma nakwiiphalamende zengingqi, kunye nokulungiswa kwekomiti kunye nezithuba kwikomiti yokulawula i-Duma. Ithi ibambe iingubo ze-centrist njengoko iqonga layo liquka zombini iimarike zamahhala kunye nokwabiwa kwakhona kobutyebi. Iqela lamandla lidla ngokubonakala lisebenza njengenjongo ephambili yokugcina iinkokheli zayo ngamandla.
Leli qela elide lasekhohlo lisekwe emva kokuwa kweSoviet Union ukuqhubela phambili kwiLeninist ne-nationalist ideology; ukuzalwa kwayo kwangoku kwasungulwa ngo-1993 ngabangama-politics baseSoviet. Yona yeyona nkampani yesibini enkulu kunazo zonke eRussia, kunye nabangaphezu kwama-160,000 ababhalisile abavoti abonakalisa njengobuKomanisi. IQumrhu lamaKomanisi lihlala lilandela emva kwe-United Kingdom evoti likaMongameli kunye nokumelela kwepalamente. Ngo-2010, iqela libiza "ukuvuselelwa kwakhona" kweRashiya.
I-Liberal Democratic Party yaseRashiya
Inkokheli yolu buhlanga, iqela lommeli mhlawumbi lenye yezopolitiko eziphambene kakhulu eRussia, uVladimir Zhirinovsky, imbono zayo zivela kwibala (ukuxelela amaMerika ukuba alondoloze "umhlanga omhlophe," omnye) ongenamanga (ofuna ukuba iRashiya ithathe iAlaska kubuya eUnited States). Iqela lasekwa ngo-1991 njengeqela lesibini elisemthethweni emva kokuwa kweSoviet Union kwaye iphethe abancinci abancinci kwi-Duma nakwiiphalamende zengingqi. Ngokubhekiselele kwiplatifomu, iqela, elizibophelela njenge-centrist, libiza umnotho odibeneyo kunye nomgaqo-nkqubo welizwe kunye nomgaqo-nkqubo welizwe langaphandle.
Leli qela elisekhohlo lisekho libuye linamanani amancinci amancinci aseDuma kunye nezihlalo zepalamente zengingqi. Ifuna inzululwazi entsha kunye nemimango ngokwayo njengeqela labantu ngelixa i-United Kingdom yaseRashiya yinkampani yamandla. Amaqela kulo mbutho aquka amaRussia kunye neeRedina kunye noRomina, okanye uManyano-National Patriotic Union. Iqonga lixhasa uluntu lwenhlalakahle ngokulingana nokulingana kwabo bonke. Inqaba "u-oligarchic capitalism" kodwa akafuni ukubuyela kwiSoviet version ye-socialism.
Iqela lesambulela elidibanisa kunye nabaphikisana neKremlin phantsi kolawulo lwePutin-Medvedev: kude kusekhohlo, kunene nakwizinto eziphakathi. Eyasungulwa ngo-2006, i-coalition ehlukeneyo ibandakanya amaqela achasayo achaphazelekayo kuquka intonga ye-chess uGarry Kasparov. "Sijonge ukubuyisela ulawulo lommandla waseRashiya, ulawulo oluqinisekisiwe kuMgaqo-siseko waseRashiya ophucukileyo kwaye ungaphulile namhlanje," kusho iqela kwingxelo ekupheleni kwenkomfa yayo ka-2006. Le njongo idinga ukubuyela kwimimiselo yokubambisana kunye nokuhlukana kwamagunya. Kubiza ukubuyiswa komsebenzi wezenhlalakahle karhulumente kunye nokuzimela kommandla kunye nokuzimela kweendaba. Inkqubo yolawulo kufuneka ikhusele bonke abemi ngokulinganayo, ngokukodwa kwimiphumo eyingozi yabameli bamandla. Kungumsebenzi wethu ukukhulula ilizwe ekugqibeleni ukubandlulula, ubandlululo, nokuxhalaba kunye nokuphanga kobutyebi bethu belizwe ngamagosa karhulumente. " Eminye iRashiya yile negama leqela lezopolitiko laseBolshevik lingavumi ukubhaliswa nguRhulumente.
I-US ne-Great Britain: Ulwalamano olukhethekileyo emva kweMfazwe Yehlabathi II
Uhlobo lwe-Lady Macbeth Uhlalutyo
Khuphukisa ukuzuza kweZakhiwo zoLuntu usebenzisa iiFibers kwisidlo sakho sokwakha umzimba
I-African Age Age - iminyaka eyi-1 yobuBukumkani bo-Afrika
5 Iingxabano zeNkundla yokuBulala